Famerenan-desona: misy sakafo tokony homen-danja | NewsMada
Famerenan-desona: misy sakafo tokony homen-danja
Par Taratra sur 17/07/2019
Heverina fa efa ao anatin’ny fotoam-pamerenan-desona tanteraka ireo kilonga hiatrika ny fanadinam-panjakana, ny CEPE, amin’izao fotoana izao. Tsy ho ela ihany koa ny an’ireo zokiny amin’ny kilasy fahasivy, raha toa ka mbola manana telo volana ireo mpianatra amin’ny kilasy famaranana hamitana ny fandaharam-pianarana, mialoha ny famerenana.
Tena ilaina sy antoky ny fahombiazana ny famerenan-desona. Mandritra izany, miasa mafy ny atidoha, ny andro ihany koa, mangatsiaka ka mila tohana fanampiny ny vatana. Tsy misy mirakla ny fahombiazana amin’ny fanadinana. Na izany aza, misy karazan-tsakafo tena ilain’ny atidoha, tsy hahavizana azy. Fantaro fa ilain’ny atidoha avokoa ny 20%-n’ny hery entin’ny sakafo hanina.
Miasa mafy izy, rehefa amin’ny fotoana famerenan-desona ka mitaky fanampin-tsakafo. Voalohany amin’izany ny sakafo be proteina sy vy, toy ny hena mena sy ny atody ary ny trondro. Eo koa ny « acides gras », hita amin’ny trondro matavy sy ny menaka « colza ». Ankoatra ireo, mila kaslioma, izay hita amin’ny vokatra avy amin’ny ronono, sy vitamina C, hita amin’ny voasary, ny manga, ny poavrao mena, ny persily, ny voatabia, sns, ihany koa ny atidoha. Mbola ilaina ihany koa ny voamaina, manan-karena « phosphore » sy ny voankazo maina mbamin’ny serealy, samy be gliosida. Tsy vitan’izay fa tokony ho ampy torimaso tsara ny mpianatra, na eo aza ny famerenan-desona. Marihina hatrany fa tsy mandritra ny fanadinana vao hihinana ireo karazan-tsakafo ireo fa dieny izao ao anatin’ny famerenan-desona izao.